VIDEO DEG DEG Hanjabada Dagal Turki Iyo Masar Iyo Awooda Yaabka leh ee Masar Leedahay | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Masar hadda waa awood militari oo ka awood roon tan Turkiga, sida ku xusan Heerka Awoodda Milatari ee 2020. Darajadan cusub ayaa ah mid muhiim ah ,tan iyo markii ay timid xilli Turkida iyo Masar ay qarka u saaran yihiin heshiis dhanka badda ah ee Turkiga iyo Libya, qoditaanka gaaska Turkiga ee ka baxa xeebta Qubrus, iyo khilaafka socda ee Libya.
Marka loo eego darajaynta, oo Loo Adeeg Saday in ka badan 50 arrimood oo shaqsiyadeed si loo qiyaaso xoogga ciidan ee ummada, Masar waxay Ka kor Martay Turkey iyadoo horay usii kacday sedex meelood,tan iyo sanadkii la soo dhaafay, waxayna noqotay qeybta sagaalaad ee militariga ugu awooda sareysa , Halka Turkiga Gashay Kaalinta sagaalaad ilaa 11aad.
Masar iyo Turkiguba labaduba waxay leeyihiin militar aad u xoog badan marka loo eego heerarka gobolka.
Oded Berkowitz(Odid Baakowaatis, oo ah kuxigeenka agaasimaha sirdoonka ee MAX Security, oo ah shirkada sirdoonka iyo amaanka ee fadhigeedu yahay Israel, ayaa yiri “Awoodda Milatari ee Masar waa tixraac fiican, laakiin shaqsi ahaan uma maleynayo inay tahay in loo qaddariyo qiimaha wajigiisa.
“Sida nooc kasta oo ka mid ah tixraacyada ama warbixin kasta oo aad u ballaaran, waxay ku dhexjirtaa si mug leh ayay u hilmaamtaa waxyaabo badan,” ayuu yidhi. Tani maahan oo keliya qaddiyadda Turkiga iyo Masar, laakiin liiska oo dhan.
Berkowitz wuxuu aaminsan yahay inay adagtahay in la sameeyo qiimeynkan oo kale maxaa yeelay qodobo kala duwan ayaa isku beddeli kara “kiis xaalad ahaan waxay kuxirantahay waddanka ay khusayso, xaalada juquraafi ahaan waqtigaas, jilaa kale oo ku lug leh, iyo wixii la mid ah.”
Xaaladda jirta ayaa ah xaaladda taagan ee Liibiya, halkaasoo Masar iyo Turkiga ay ka taageerayaan dhinacyada iska soo horjeedda.
Liibiya, Turkiga waxay si toos ah taageero militari siineysaa Dowladda Xakamaynta Qaranka (GNA) ee Tripoli ,Halka Masar waxay ka mid tahay taakuleynta Ciidamada Mucaaradka Libya (LNA) oo xaruntiisu tahay bariga Tobruk.
“Masar iyo Turkiga labaduba waxay ahaayeen kuwo si qarsoodi ah, ilaa xad ah, oo taageeraya dhinacyada iska soo horjeeda ee isku dhaca sannadaha, ilaa dhowaan markii Turkigu u arkay dhinaceeda, iyo danaha, inay yihiin khatar sare, oo ay weheliso qodobo kale, waxay u keeneen inay si rasmi ah u bilawdo toos faragelin militari, ”ayuu yiri Berkowitz.
Maaddaama aysan xilligan jirin arrimo la mid ah isku dhaca oo ku qasbi kara Masar inay qaado tillaabooyin toos ah oo la mid ah, “is-afgaradku waa faragelin toos ah oo militari (Turkiga) iyo mid aan toos ahayn, kaalmaynta milatariga (Masar), taas oo dabiici ahaan ka dhigaysa mid aan dheellitirnayn,” wuxuu yidhi.
Berkowitz wuxuu kaloo carabka ku adkeeyay in masrax walba oo isku dhac ah loo baahan yahay in la baaro oo lagu qiimeeyo xaaladiisa gaarka ah iyo xaalada guud ee juquraafi ahaan.
“Tusaale ahaan, Turkey hadda waa mid si muuqata milatari ahaan u fidsan maadaama ay ku lug leedahay laba isku dhac ah oo ka baxsan xuduudaheeda Sida (Syria iyo Libya) marka lagu daro ololaha joogtada ah ee militariga ee ka dhanka ah xoogaga Kurdiyiinta,”
Sidaas darteed, Turkiga awooda militari ee ka baxsan xuduudaheeda ayaa waqtigan xaadirka ah.
Masar waxa kale oo ay leedahay awood xadidan oo ay ku fuliso Meel Ka Baxsan wadamada dariska la ah, laakiin waxoogaa xor ayey u tahay inay sidaa samayso, maadaama balanqaadyadeeda militari ee hada ay yaryihiin, ”ayuu yidhi.
Turkiga iyo Masar ayaa ahaa kuwa xulufo weyn ka ahaa bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika Ka Hor tan iyo bishii Luulyo 2013, markii afgambi militari oo ka dhacay Masar ay xukunka ka tuureen Madaxweynaha Ikhwaanul Muslimiinka Maxamed Morsi, kaasoo ay taageerayeen Turkiga iyo Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan.
Afgambigii kadib, taliyaha militariga ee xukunka ka tuuray Morsi, Abdel Fattah el-Sisi, waxaa loo doortay madaxweynaha Masar. Sisi oo taageero ka helaya Sacuudiga iyo Imaaraatka ayaa jabsaday walaaltinimadii.
Nervana Mahmoud, oo ah falanqeeye madax banaan arrimaha Bariga Dhexe ayaa yidhi, “Masar run ahaantii waxay dareemaysaa hanjabaad, maahan kaliya taageerada Turkiga ee Ikhwaanul Muslimiinka, laakiin himilada gobal ee Turkiga, gaar ahaan bariga iyo Libya.
Masar waxay dareentaa gacmaha Turkiga meelkasta oo ay joogaan, taageerada Erdogan ee Xamaas, iyo himilooyinkiisa balaadhan ee qaarada Afrika, iyo taageeradiisa furan ee dawlada galbeedka Liibiya.
Maxamud wuxuu yidhi gobol ka mid ah dawladaha intiisa badani ay ku xumaadeen ama daciif yihiin “hoggaanka Masar wuxuu u arkaa awoodeeda militari inay tahay safka ugu weyn ee difaaca ka dhanka ah himilooyinka gobolka ee awoodaha kale ee Bariga Dhexe, gaar ahaan Turkiga iyo Iran.”
Levent Özgül, oo ah falanqeeye militari oo saldhigiisu yahay Ankara iyo aasaasaha shirkadda BlueMelange Consultancy, wuxuu tilmaamay in Turkiga iyo Masar “ay yihiin dalal millatari oo adag oo ku saleysan taariikh ahaan xoog badan oo hubaysan, dhaqammo milatari iyo dad aad u tiro badan.”
Militariga Turkiga, wuxuu yidhi, inta badan waxay ku saleysan yihiin dhul ballaaran oo leh awood taageero dab-demis, dhowr drones, diyaarad helicopter ah oo aad u weyn iyo heerar sare oo dhanka saadka ah ee gaashaandhigga NATO – waxay weli tahay ciidamadii labaad ee ugu weyn isbaheysiga. Turkiga wuxuu kale oo leeyahay maraakiib dagaal oo ku hubaysan gantaalada lidka diyaaradaha ee qumaatiga u kaca, kuwa dhulka hoostiisa mara, iyo ciidamada cirka oo duqoobay, si kastaba ha ahaatee, waxay haysaa diyaarad taageero muhiim ah.
Militariga Turkiga, wuxuu yidhi, “inta badan waxay kuxirantahay dagaalka dhulka iyo adeegsiga duug, laakiin casriyeysan, taangiyo iyo gawaadhi gaashaaman oo ay la socdaan Fırtına 155/52 howitzer iyo gantaalaha lidka taangiyada.”
Masar, dhinaca kale, waxay leedahay gantaallo aad u ballaadhan oo gantaalaha difaaca cirka ah, gaar ahaan kuwa horumarsan ee Ruushka laga dhisay ee S-300s iyo Mareykanka Patriots.
Laakiin nidaamyada gantaalaha ee dalka lagu dhisay ee Turkiga ayaa u baahan waqti, tikniyoolajiyad iyo lacag aad u badan, ka hor inta aysan hawl galeyn, ayuu yiri Özgül. “Sidaas darteed, shabakadda difaaca cirka Masar ayaa aad uga awood badan tan Turkiga,” ayuu yidhi.
Intooda badan F-16-yada Turkiga ma aha kuwo la casriyeeyay. Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Turkiga ay sidoo kale u waayeen duuliyayaal duuliyayaal dhammaantood ku duulaya taas oo ka dhalatay xasuuqii milatari ee baahsanaa ka dib isku daygii afgambi ee July 15, 2016. Mashruuceeda dagaalka jiilka-shanaad ee TF-X sidoo kale uma badna inuu ka baxo dhulka mustaqbalka.
In kasta oo labada waddan ciidammada qalabka sida ay aad u awood badan yihiin, militariga Masar ayaa laga yaabaa inay dhowaan caddeeyaan inay yihiin koox si weyn u mucaaradsan, isla markaana carqalad ku ah yoolalka Turkiga ee bariga Mediterranean, Libya, iyo wixii ka dambeeya.
Previous articleDAAWO VIDEO:Fanaan caanka cabdi Dhaanto oo Gabadh Codsaday Guurdoona Inuu Yahay Sheegay.
Next articleDAAWO VIDEO Cajiib Xildhibaan Somaliland oo Kaga Yaabiyey Barlamaanka Maamulka Mar kale”Midnimada Somali Inagama Dhiman Maalin 5ta Somali Midowaan Baan Sugayna